Ciidmada Ethiopia ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya oo xasuuq ba an ku haayo dadka wax galka ah. |
Ciidmada Ethiopia ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya oo xasuuq ba an ku haayo dadka wax galka ah.
Ciidamada meleteriga dowlada Ethiopia ayaa waxa ay dileen dhakhtar caan ka ah degmada Caabud-waaq ee gobolka Gal-galduud ee bartamaha dalka Soomaaliya xilli uu fadhiyay Maqaayad uu shaah ka cabayay.
Kooxda dilka fulisayka tirsan ciidamada xabashid Ethiopia ayaa waxaa lasheegay in ay wateen gaari nuuca raaxada ah iyaga oo dhaqtarka bar-tilmaameedkoodu ahaa, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ay qaateen meydkiisa.
Dad aad u farabadan ayaa Dibadbax looga soo horjeedo dilka dhaqtarka ayaa la sheegay iney maanta ka dhigeen Magaalada Caabudwaaq oo shacabka Magaaladaasi ay ku muujinayaan dareenkooda ku aadan sida ay u arkaan dilka ka dhacay Magaalada.
Ciidamada Ethioipa shalay ayeey dil barer ah ka geesteen gudaha Masjid ku yaalla bartamaha B/weyne iyaga oo weerarka Masjidka ay ku qaadeen la’eeganayay sarkaal maamulkii hore ee gobalka Hiiraan kamid ahaa kaas oo sida lasheegay si aad ah u diidanaa falalka guracan ee ciidanka Ethiopia ay kula dhaqmaan mawaadiniinta Soomaalida ah.